IOlimpus OM-D E-M10 uMark III, touch retro kwaye ilungele ukuhamba | Iindaba zeGajethi
IOlimpus OM-D E-M10 uMark III, touch retro kwaye ilungele ukuhamba
Iikhamera ezingenazipili zeOlimpus ime ngaphandle kocingo lwe-retro; imbonakalo yeklasikhi eyaziwayo kuluntu ngokubanzi. Inkampani iyayazi le nto kwaye umgca wezixhobo ezitsha uyaqhubeka. Yiyo loo nto ukuvela kokutsha IOlimpus OM-D E-M10 uMark III yazi njengezizukulwana ezibini ezidlulileyo.
Emva kweminyaka kwintengiso yeOlimpus OM-D E-M10 uMark II owangena ezihlangwini zakhe sele enziwe ngokusemthethweni. Ukunyaniseka, utshintsho alubonakali. Ewe kuyaqhubeka kunjalo enye yeemodeli ezilungileyo zokuhamba ukukhanya (umzimba wakho ufumana ubunzima be-362 gram) kwaye ufumane iziphumo ezilungileyo.
IOlimpus OM-D E-M10 uMark III ubonakalisa iprosesa yemifanekiso yenkampani yamva nje: I-TruePic VIII. Kwakhona, inzwa oya kuyifumana kuyo yi I-megapixel eyi-16 ye-MOS ephilayo kunye ne-5-axis image stabilizer. Okwangoku, ngokungafaniyo nabanye okhuphisana nabo (abanye beFijifilm okanye abanye bakwaSony), le modeli ine-viewfinder ebonakalayo. Ukucacisa ngakumbi, ine-2,36 yezigidi zamanqaku okusonjululwa.
Kwelinye icala, ngasemva, ukongeza kulawulo oluthile, ikhusi le-LCD likwakhona. Idayagonal yale yile 3 intshi kwaye uchukumise ngokupheleleyo. Le nkampani inye ithelekisa ukuphathwa kwayo naleyo ye- efowuni. I-Autofocus kule khamera yeOlimpus ichukumisa indawo ezili-121.
Malunga nokurekhodwa kwevidiyo, IOlimpus OM-D E-M10 uMark III unakho ukufumana iziqwengana kwisisombululo se4kYimfashini, ngesantya esiphezulu sama-30 Fps. Kuyenzeka ukuba ufumane uqhushumbo lokudubula ukuya kuthi ga kwi-8,6 fps, engalunganga kwaphela.
Okokugqibela, umthwalo we ibhetri yayo iya kukuvumela ukuba uthathe ukuya kuma-330 kwaye zonke iifoto zinokwabelwana ngoqhagamshelo lweWiFi. I-Olimpus ye-OM-D E-M10 uMark III iya kuthengiswa embindini wale nyanga kaSeptemba. Iya kufumaneka ngee-shades ezimbini: emnyama okanye isilivere. Kwakhona, ungayifumana kuphela umzimba wee-euro ezingama-649. Okanye, khetha iinyanda ezimbini zeelensi: umzimba kunye noMZUIKO DIGITAL 14-42mm 1: 3.5-5.6 II R ilensi enexabiso kwi 699 euro; ngelixa iphakheji yesibini yile: umzimba kunye noMZUIKO DIGITAL 14-42mm 1: 3.5-5.6 EZ panake lens a 799 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukufota » IOlimpus OM-D E-M10 uMark III, touch retro kwaye ilungele ukuhamba